MacOS High Sierra ọha beta, betas ndị ọzọ, nhazi oge Night Shift, na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
MacOS High Sierra ọha beta, betas ndị ọzọ, nhazi oge Night Shift, na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Jordi Gimenez | | MacOS Sierra ukwu, ọtụtụ
Izu ụka ikpeazu nke ọnwa June, ụdị beta ndị anyị na-eche ugbu a abịala. Versiondị nke na-ewelite atụmanya kachasị na-abụkarị nke sistemụ arụmọrụ ọha na eze na nke a bụ kpọmkwem nke emeela ogologo oge ịmalite. Apple hapụrụ awa ole na ole gara aga mmelite na beta 2 maka ndị mmepe nke yiri ka gbanwere ụfọdụ dị mkpa ọdịda na awa mgbe e mesịrị ulo oru ihe bụ taa na macOS High Sierra mbụ beta ọha.
Ugbu a, anyị nwere ike ikwu na ụdị beta ọhaneze niile dị na tebụl na ndị ọrụ nwere ike iwunye ha na Mac. Dị ka mgbe niile, anyị na-akwado ịkpachara anya na nke a ma ọ bụrụ na anyị edoghị anya banyere ihe anyị na-egwu, ọ kachasị mma ịnọ jụụ iji zere nsogbu ndị nwere ike. Mana n'ime izu a anyị nwetara ozi dị mkpa karịa ụnyaahụ wee meghee mbụ Apple Store na Taiwan, ya mere, anyị ji obere nchịkọta nke kachasị mma nke izu gara aga nke June.
Izu a anyị ahụla otú ịtọọ oge abalị na Macs iji rụọ ọrụ na akpaghị aka. Nke a bụ ihe na-deactivated si si Mac ma anyị nwere ike hazi ya mere rụọ ọrụ na nhazi oge Na ụzọ dị mfe.
Akụkọ ndị a metụtara "Onye na-ese foto" na ihe mere o ji eri ọtụtụ akụ. Anyị na-egosikwa gị otu esi edozi ya n'otu ụzọ dị mfe ma dị irè.
Maapụ Apple na Madrid already nụrịrị ozi njem ọha na eze. Anyị chere na Apple ga-agba ọsọ karịa ememe na Spanish isi obodo nke Mpako Day. Nke a na-eme ka ọtụtụ mmadụ na-eleta obodo ahụ ma ịnwe nhọrọ na-arụ ọrụ na ngwa Maps nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka ndị nọ n'èzí. Enwere olile anya na ha ga-aga n’ihu ịgbasa ngwa ọrụ n’obodo ndị ọzọ.
Kporie ihe fọdụụrụ Sọnde!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » MacOS High Sierra ọha beta, betas ndị ọzọ, nhazi oge Night Shift, na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Ina malitere na ọdụ data na Records maka Mac
Maapụ ọha na-emecha rute Madrid